I-akhawunti ye-Savings: yini, ihluke kanjani kwabanye nokuthi ungayivula kanjani | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | | Ama-akhawunti asebhange
Ingabe ungomunye walabo ababela ingxenye yomholo wakho kwi-akhawunti yokonga? Noma labo ozigcina wedwa? Noma ngabe uyini, kufanele wazi ukuthi amabhange anikela ngalolu hlobo lomkhiqizo.
Uma ufuna yazi ukuthi yini i-akhawunti yokonga, yehluke kanjani kokunye, izici zayo, ukuthi ungavula kanjani into eyodwa nangaphezulu ngakho, namuhla sikulungiselele lokhu kuhlanganiswa.
1 Yini i-akhawunti yokonga
1.1 I-akhawunti yokonga noma i-akhawunti ekhokhelwayo
1.2 I-akhawunti yokonga ne-akhawunti yasebhange
2 Izici ze-akhawunti yokonga
3 Ayini ama-akhawunti okonga?
4 Uyivula kanjani i-akhawunti yokonga
5 Ungayikhetha kanjani ibhange elihle kakhulu le-akhawunti yokonga eSpain
Yini i-akhawunti yokonga
I-akhawunti yokonga empeleni ingumkhiqizo wezezimali lokho kuzokuvumela ukuthi ugcine ingxenye yemali (ngaphandle kokusho ukungafinyeleli) ukugwema ukuyisebenzisa. Ngale ndlela, umuntu uyasizwa ukulawula ukusetshenziswa kwemali ngandlela thile ngoba, emholweni wabo, ingxenye yabelwe ukuba kancane kancane babe "nomatilasi" abakwazi ukufinyelela kuwo uma bewudinga.
Manje, kufanele wenze leyo "investimenti", okungukuthi, leyo mali ebekiwe, ngezikhathi ezithile, kuthi ngokubuyayo uthole inzalo yayo.
I-akhawunti yokonga noma i-akhawunti ekhokhelwayo
Enye yezinkinga ezijwayelekile ukuthi abaningi baphambanisa i-akhawunti yokonga ne-akhawunti ekhokhelwayo, kanti empeleni ayiwona umqondo ofanayo.
I-akhawunti ekhokhelwayo i-akhawunti yokonga, kepha yehlukile. Okokuqala, kufanele ifakwe ngaphakathi kwe-akhawunti yasebhange, futhi amanani enzalo aphezulu. Futhi okwesibili, ngoba sikhuluma nge-akhawunti ebophezelayo (ngoba bazokunikeza inzuzo, yebo, kepha ngokubuyisela kuzofanela uqashe ezinye izinsizakalo noma uhlangabezane nezidingo ezingeziwe abazicela kuwe).
Eqinisweni, ukuhlukanisa phakathi kwe-akhawunti ekhokhelwayo ne-akhawunti yokonga kulula uma ubheka i-TIN ne-APR; Uma lokhu kuphezulu, khona-ke sikhuluma nge-akhawunti ekhokhelwe, uma iphansi, yi-akhawunti yokonga.
I-akhawunti yokonga ne-akhawunti yasebhange
Elinye iphutha ukuthi xuba i-akhawunti yokonga ne-akhawunti yasebhange (noma ukuthi ibhange "lisidayisela" lona ngokulingana). Iqiniso ukuthi yizinto ezimbili ezihlukene kanti ukhiye usezinhlosweni ngayinye enazo.
Ngenkathi inhloso ye-akhawunti yasebhange ukwenza imisebenzi yezezimali (ukhokhe, uqoqe, uthumele okwenziwayo ..., ngamanye amagama, hambisa imali), esimweni lapho i-akhawunti yokonga inhloso yayo enkulu ukuthi imali isele, Ukuthi ayihambi isikhashana nokuthi, ngokuhamba kwesikhathi, ikunikeza inzuzo, okusho ukuthi, uthola imali ethe xaxa ngokuba nokuthula. Lokho akusho ukuthi awukwazi ukuyifinyelela (inqobo nje uma ihlangabezana nochungechunge lwezimfuneko zokwenza kanjalo nangokuya ngohlobo lwenkontileka oyisayinile).
Izici ze-akhawunti yokonga
Ukugxila ku-akhawunti yokonga, kufanele ucabangele izici lo mkhiqizo onazo, ngoba zizokusiza ukuwuqonda kangcono. Ukuze uqalise:
Inesilinganiso senzalo. Lokhu kuzoba ngaphansi kwesikhathi esinqunyiwe. Amabhange ajwayele ukunikela phakathi kuka-0% no-1% APR (kwesinye isikhathi anikela ngokuningi, kepha qaphela ukuphrinta okuhle). Okujwayelekile ngokusho kwe-ECB ngu-0,03% APR (ngakho-ke labo abakunikeza okuncane abakufanele).
Amanye ama-akhawunti okonga anezimo ezikhethekile. Ngokuphathelene nokuthi kukhona ukungena kwabeholo (noma ukuthi kuhlangatshezwa ezinye izimo ukunikeza ukufinyelela kulolo hlobo lwe-akhawunti). Kepha kufanele wazi ukuthi, kuleso simo, akuyona i-akhawunti yokonga ngempela.
Ayini ama-akhawunti okonga?
Ungazibuza ukuthi kungani uqasha i-akhawunti yokonga (ikakhulukazi uma usuvele unayo i-akhawunti yasebhange noma ungomunye walabo, ngokungaqondile, abagcina ingxenye yemali ngenyanga). Kepha iqiniso ukuthi kunezinhloso ezintathu noma ukusetshenziswa okusetshenziselwe zona:
Ngoba wenza imali ngayo. Akukhona ukuthi uzothola okuningi, kepha uma imali "imisiwe" ayikhiqizi lutho. Ngakolunye uhlangothi, ku-akhawunti yokonga ibingayenza, noma ngabe bekungamasenti ambalwa nje.
Ngoba ukuba nemali kwi-akhawunti akusho ukuthi awukwazi ukuyikhipha uma uyidinga. Ngaphandle kokuthi usayine imibandela ebekela imingcele, ngokuyisisekelo ungayisusa noma kunini.
Ukugwema ukuchitha konke. Njengoba igama liphakamisa, kungokonga, okusho ukuthi akufanele kusetshenziswe. Imindeni eminingi iqasha lolu hlobo lwensizakalo yasebhange yezingane zayo, ukuze ifunde ukonga nokwazi ukuthi lesi senzo singabasiza kanjani ukuba babe nemali uma kwenzeka izehlakalo ezingalindelekile, noma lapho befuna okuthile futhi badinga ukukhulisa imali ukuze bakuthole.
Uyivula kanjani i-akhawunti yokonga
Uma, ngemuva kwakho konke esikutshele khona, uzikhuthaze ukuthi uvule i-akhawunti yokonga, kufanele wazi ukuthi lokhu kulula kakhulu. Vele, kulula ukuthi, ngaphambi kokwenza noma yini, uthintane namabhange amaningi ngoba izimo zingahluka ngokuya ngeyodwa futhi kungaba nenzuzo enkulu ukuba nayo ebhange elihlukile kunelakho (noma ushintshe konke uye kulelo bhange elisha) .
Ngokuvamile, ukuvula i-akhawunti yokonga udinga kuphela:
Vela ehhovisi. Cishe wonke amabhange anamahhovisi emadolobheni ngakho-ke ngeke kube nankinga. Futhi nakwamanye amadolobha ungathola amagatsha, ukukwazisa nokwenza izinqubo.
Kwenze online. Ngenye indlela, futhi kulezi zinsuku isetshenziswa kakhulu, ngoba futhi ikuvumela ukuthi uqhathanise ama-akhawunti okonga phakathi kwamabhange ahlukene ukubona ukuthi yikuphi okuhle kuwe.
Kwenze ngocingo. Akujwayelekile, kepha kungenziwa.
Inkinga okungahle kube nayo lawa mafomu amabili okugcina ukuthi kungenzeka ukuthi, ukuze uziveze, bakudinga ukuthi udlule ehhovisi (ngenxa yenkinga "yokwenza imali ibe semthethweni").
Ungayikhetha kanjani ibhange elihle kakhulu le-akhawunti yokonga eSpain
Umbuzo omkhulu: ngiya kuliphi ibhange ukuvula i-akhawunti enjalo? Impendulo ayilula, ngoba ibhange ngalinye linikela ngezimo ezahlukahlukene futhi kuyadingeka ukuqhathanisa bonke ukukhetha okufanelekile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi umuntu uphelele kumuntu oyedwa akusho ukuthi liphelele komunye, ngoba lizonqunywa ngokususelwa kwezinye izimo.
Noma kunjalo, singakunika imihlahlandlela ezokusiza wazi ukuthi ungayikhetha kanjani ehamba phambili:
Ukuthi bakunikeza ukubuya okuhle. Ngokusobala, lowo onenzuzo ephezulu kakhulu (inqobo nje uma ezinye izimo zingahlukumezi), uzoba yisinqumo esingcono kakhulu.
Lokho akunamakhomishini. Qaphela lokhu ngoba, kwesinye isikhathi, noma ngabe unenzuzo enhle, ekugcineni amakhomishini akwenza ulahlekelwe yilokho okutholayo ngokumiswa kwemali (noma ngisho nengcosana yalokho okwakho).
Yiba nezimo. Futhi, kwesinye isikhathi, kunama-akhawunti avimba imali yakho ngaphandle kokuthi ukwazi ukuba nayo, noma ngabe uyidinga.
Unalokhu engqondweni, kunezimo eziningi amabhange angazidinga, nokuthi kuzofanele uhlole ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinqumo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ama-akhawunti asebhange » I-akhawunti yokonga
Umehluko phakathi kwekhadi lesikweletu nedebhithi
Ngubani igama lenkampani